Gabadhii u Horeysay Taariikhda Xami Cabdulle oo u Taagan Xilka Duqa degmada Boosaaso | SAHAN ONLINE
Gabadhii u Horeysay Taariikhda Xami Cabdulle oo u Taagan Xilka Duqa degmada Boosaaso
Xamdi Cabdulle Cabdullaahi
Waxaa maanta shaaca ka qaaday iney u taagantahay Musharaxnimada duqa degmada Boosaaso Xamdi Cabdulle Cabdullaahi oo kamid ah gabdhaha aqoonyahanka ah ee kasoo jeeda gobolka Bari.
Xamdi Cabdulle Cabdullaahi ayaa ah gabar la socota Xaalada Siyaasadeed ee dalka iyadoo xiligana ku sugan dalka Kenya waana mid ka shaqeysa Arrimaha horumarinta Puntland.
Musharaxad Xamdi Cabdulle Cabdullaahi ayaa noqoneysa gabadhii ugu horeysay Taariikhda gobolka Bari isu-soo sharaxda Jagada Duqa degmada magaaladda Boosaaso,waxaana jira raga badan oo u sharaxan xilkan oo quud-dareynaya iney Hoggaanka qabtaan.
Musharaxada oo musharaxnimadeeda kaga dhawaaqday magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ku sheegtay sababta ay isugu soo sharaxday Jagadan iney tahay baahiyaha loo qabo in wax laga qabto arrimaha bulshada iyo horumarinta degmada Boosaaso isla markaana ay wax badan kusoo kordhin doonto.
Hoggaanka haddii loo doorto ayey sheegtay iney Isbadel ballaaran ku sameyn doonto caasimada ganacsiga Puntland ee magaaladda Boosaaso.
Magaalooyinka Qardho iyo Garoowe ayaa xiligan sidoo kale waxaa u taagan laba gabdhood oo doonaya iney noqdaan Hoggaanka magaalooyinkaas walow cadaadis xoogan kala kulmayaan rag badan oo jagadan u sharaxan.
Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku dhiirigelinaya iney haweenka Puntland door muuqda ku yeeshaan Siyaasada iyo Xukuumadiisa waana markii ugu horeysay ay Haweenku door bidaan xilalka sarsare ee Dowladda maadaama ay qeyb mug leh ka qaateen dhismaha Puntland.